Ọrịa cancer | Ọkọwa Okwu Ahụike
Mgbochi ọrịa kansa bụ ọgwụgwọ kachasị mma na ịghọta ihe na-akpata ọrịa cancer dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhapụ ya. Ego ego abanyela n’ịmụta etu esi emepụta ọrịa cancer karịa ka ọ dịla n’ịmụta ka esi agwọ ya. Ihe ị na-agụ ịgụ nwere ike iju gị anya.
Mmanya na-aba n'anya, ihe egwu kansa.
N'ime ihe omumu ohuru nke emere na Japan, a ka nwere ihe omuma nke mmanya riri aka rue ka o di n ’udiri oke oria nke oria di ka onye kachasi ala n’inwe mmanya.
Etu Oria Cancer Na-esi Wepụta Ihe Na-enye Aka Na Obi Gị
Bright Amponsah Nwere ike 4, 2020
N'ime ara ara, metastases na ụbụrụ na-akọkarị ikpe ọnwụ; ọtụtụ ụmụ nwanyị na - adị ndụ ihe na-erughị otu afọ mgbe nchọpụta ya. Ọmụmụ ihe ọhụrụ na-ekpughe otú ọrịa cancer ahụ si nwee ike ịgafe ihe mgbochi-ụbụrụ ọbara: site na iziga ndị iro na-egbochi usoro sel nke transcytosis, na-aghọ aghụghọ mkpụrụ ndụ na BBB. Ime ka ọrịa ara ure na-achọkarị ọkpụkpụ, akpa ume na ụbụrụ. Mpempe ụbụrụ dị oke ize ndụ; ọtụtụ ụmụ nwanyị na - adị ndụ ihe na-erughị otu afọ mgbe nchọpụta ya. Kedụ ka ọrịa kansa si nwee ike ịgafe ihe mgbochi ụbụrụ ọbara? Enwere ike igbochi ya?